डार्कसर्कल र डन्डीफोर आएर हैरान हुनु हुन्छ ? केराको बोक्राले ७ दिनमै हुन्छ अनुहार सफा ! | सुदुरपश्चिम खबर
सुदुरपश्चिम खबर प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७७ 12
हामी धेरैलाई केराको फाइदाका बारेमा त थाहा नै होला। तर,केरा केराको बोक्राका बारेमा भने कमैलाई मात्र थाहा हुन सक्छ । केराको बोक्रामा म्याग्नेसियम, पोटासियम र कार्बोहाइड्रेटजस्ता न्यूट्रिएट्स जस्ता तत्व पाइने गरिन्छ । त्यसैले केराको बोक्राका पनि फाइदा हुने गर्दछ ।
आज हामी तपाईलाई केराको बोक्राका फाइदाका बारेमा जानकारी दिदै छौँ :
१. आँखाको तल्लो छेउ भागमा केराको बोक्रालाई घोटेर दल्ने गरेमा डार्क सर्कल हट्छ ।
२. केराको बोक्राले पहेलो भएको दाँतमा घोट्नु होस् । दिनुहँ यसो गर्दा दाँतको पहेलोपना हटेर दाँतमा चमक आउँछ ।
३. केराको बोक्रालाई जुत्तामा रगड्नाले टलकिन्छ, चिम्किन्छ ।
४. केराको बोक्रालाई डन्डिफोर निस्किएको ठाउँमा लगायो भने केही दिनमै डन्डिफोरबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ ।
५. तपाईलाई सिडी वा डिभिडी स्क्र्याचको समस्या भएमा केराको छालाले सफा गर्नुहोस्।
६. मासुलाई पकाउँदा त्यसमा थोरै समयका लागि केराको बोक्रा पनि राखेर त्यसलाई केहिबेरपछि निकाल्नुहोस् ।यसले मासुलाई चाँडै पकाउँन मद्दत गर्छ ।
७) केराको बोक्राले फुटेको कुर्कुचामा ठिक बनाउन सहयोग गर्दछ। केराको बोक्रालाई फुटेको कुर्कुचामा घोट्नुहोस् र पाँच मिनेटपछि धुनुहोस्। यसो गर्नाले फुटेको कुकुर्चालाई ठिक गर्छ । फ्रिजमा राखेको पानी सिधै पि’उनेहरुले पढ्नै पर्ने कुरा ! गर्मीको समयमा मानिसहरू प्रायः फ्रिजको चिसो पानी पिउन मन पराउँछन् । तर, फ्रिजको पानी सीधै पिउँदा शरी’रलाई हानि पुर्याउन सक्छ । विज्ञहरूको भनाइअनुसार धेरै चिसो पानीले मु’टुलाई पनि अ’सर गर्दछ र मुटुको धड्कन पनि कम गराउन सक्छ ।
खाना खानेबित्तिकै चिसो पानी पिउँदा पाचन प्रक्रिया ढिलो हुन जान्छ । यसको खराब असर मेटाबोलिजममा पर्छ । जसको कारण शर’रमा बोसो जम्मा हुन थाल्छ र मानिस मोटाउन थाल्छ ।
घाँ’टीको संक्र’मण :
धेरै चिसो पानी पिउँदा सबैभन्दा बढी असर घाँ’टीलाई गर्छ । यसरी धेरै चिसो पानी पिउनेलाई प्रायः टन्सिलको समस्या देखिने गरेको छ ।
श’रीरको तापक्रममा असर गर्छ :
शरीरको तापक्रम ३७ डिग्री सेल्सियस हुनुपर्छ । यसलाई नियमित बनाउन शरीरलाई केही शक्ति आवश्यक पर्छ ।
तर, धेरै चिसो पानी पिउँदा खाएको खानाबाट पोषण तत्त्व तयार हुन सक्दैन । जसले गर्दा सन्तुलित तापक्रम हुनलाई समस्या पर्छ ।
मुटुको गति कम पार्छ :
जमेको पानी या धेरै चिसो पानी पिउँदा मुटुको गति कम हुनसक्छ । एक अध्ययनका अनुसार भेगिनाको तागतलाई उत्ते’जित गरिदिन्छ । भेगिनाको तागतले शरीरलाई सन्तुलित गर्न मध्यस्थता गर्छ । पानीले यसलाई उत्ते’जित बनाइदिँदा मानिसको मु’टुको चाल कम बनाउन सक्छ ।
पाचन प्रक्रियामा असर: बढी चिसो पानीले पाचन प्रक्रियालाई असर गर्दछ । किनकि, यसले रक्तसञ्चारमा असर गर्छ, जसले पाचन प्रक्रिया ढिलो गराउँछ र ठीक तरिकाले नपच्दा आवश्यक पोषक तत्त्व पनि मिल्दैन ।
अन्य बेफाईदा :
गर्मी मौसममा चिसो पानी कसलाई पो पिउन मन नलाग्ला र ? अझ फ्रिजमा राखेको चिसो चिसो पानी पिउनुको त मज्जा नै छुट्टै हुन्छ । त्यसैले त धेरै जसो मानिस गर्मीमा फ्रिजकै पानी पिउन रुचाउँछन् । तर के तपाईलाई थाहा छ फ्रिजको पानी सेवन गर्नु हाम्रो स्वास्थ्यको लागि कत्तिको हा’निकारक छ ?
२. फ्रिजमा चिस्याइएको पानी पिउनाले पे’टको ठूलो आन्द्रामा नोक्सान पुग्दा ठूलो आन्द्रा सुक्न थाल्छ जसले गर्दा आन्द्राले सही तरीकाले काम गर्न सक्दैन । परिणामस्वरुप, विहानको समयमा पेट खल्लास नभई पेटको समस्या उत्पन्न हुन्छ ।
३. धेरै चिसो पानीको सेवनले लामो समयसम्म कब्जि’यतको समस्या हुनेगर्छ ।
४. धेरै चिसो पानीको सेवनले हाम्रो श’रीरको कोषिकाहरु सुक्न थाल्छ र जसले गर्दा उक्त को’षिकाहरुले सही तरीकाले काम गर्न सक्दैन । यसको असर तपाईको मेटाबोलिज्म तथा स्वा’स्थ्यमा समेत सिधै असर पर्ने गर्छ ।
५. फ्रिजको पानी पिउनाले घाटी खराब हुने सम्भावना अधिक हुन्छ । यदि तपाईले दिनहुँ फ्रिजको चिसो पानी से’वन गर्नुहुन्छ भने होशियार हुनुहोस् । यसका कारण घाँ’टी, टन्सिल, फोक्सो तथा पाचन प्रणालीमा विभिन्न समस्या उत्पन्न हुनसक्छ । gnewsnepal